Tag: email mhinduro | Martech Zone
Tag: email mhinduro
NeChishanu, Kurume 5, 2021 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
Email kushambadzira mutambo weropa. Mumakore makumi maviri apfuura, chinhu chega chakashandurwa neemail ndechekuti vakanaka vanotumira email vanoramba vachirangwa zvakanyanya nevazhinji vanopa email. Nepo ISPs uye ESPs vaigona kuumbiridza zvachose kana vachida, ivo havangodaro. Mhedzisiro yacho ndeyekuti kune hukama hwekupokana pakati pezviviri. Internet Service Provider (ISPs) block Email Service Provider (ESPs)… uyezve maESP anomanikidzwa kuvhara